Maitiro ekuona ndangariro yandinoshandisa pane iyo iPad | IPhone nhau
Maitiro ekuona ndangariro yandinoshandisa pane iyo iPad
Pese patinotenga chishandiso chakakwirira pane icho chatinacho nhasi nemamwe mabhenefiti uye maficha, maitiro Izvo zvakajairwa kuisa akawanda maapplication sezvinobvira, kunyanya mitambo, kuyedza kuyedza mashandiro avo. Asi nekufamba kwenguva, izvi zvinoshandiswa kana mitambo zvinowanzozvisiya mukati mefaira uye hatizvishandise zvakare, kunyangwe isu tisingade kudzidzima kuitira kana tikazoda kutamba tichinazvo tisina kuikanda.
Nekufamba kwenguva, zvinogona kuitika kuti mudziyo wedu unotanga kushanda zvishoma nezvishoma. Chikonzero chikuru, kana meseji yacho isati yaonekwa, ndeyekuti mudziyo wedu wave kuda kupera nzvimbo yekuchengetera kuti ugone kuisa mamwe mashandisirwo kana kumhanyisa.
Mune ino kesi, isu tinofanirwa kutanga kuona kuti ndeapi maapplication atinoda kudzima nekuti isina nzvimbo yakakwana yeIOS kubata manejimendi, mashandiro ezvakafanana anogona kusiya zvakawanda zvinodiwa. Pane nzira yekuona kuti ndeapi mashandisiro atakaisa, nzvimbo yavanogara yakawanda uye kuti yakawanda sei nzvimbo yekuchengetera inowanikwa pane yedu kifaa.
Kuchengetedza nzvimbo inoshandiswa pane yangu iPad
Mukati meZvirongwa tinosarudza General uye gare gare Shandisa.
Iko kushandiswa kwechigadzirwa maererano nebhatiri uye zvishandiso zvinoratidzwa kurudyi. Muchikamu chekuchengetedza iyo nzvimbo yazvino yashandiswa icharatidzwa pasi pezita Mukushandisa uye nzvimbo yekuchengetera inowanikwa pane yedu kifaa pasi pemusoro wenyaya iripo.
Kana tikabaya Manage chengetedzo, maapplication ese atakaisa pane yedu kifaa anozoratidzwa nehukuru hwavanogara. Kana isu tikabaya pane chero chadzo, isu tichava nemukana wekudzima iko kunyorera kuti tiwane iyo yekuchengetera nzvimbo yairi kutora uye nekudaro kuigovera kune zvimwe zvinangwa.
16GB zvishandiso ndizvo zvinogara zvichitadza pakutanga kwekuchinja, sezvo nzvimbo chaiyo inoshandiswa mushure meinongova 12 GB. Saka kana iwe uine mukana wekutenga yepamusoro chinzvimbo mudziyo, zvinokurudzirwa usati wasarudza chishandiso chine nharembozha, kunze kwekunge chiri chinhu chakakosha chinodiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona ndangariro yandinoshandisa pane iyo iPad
Barack Obama anonyora yekutanga tweet yeakaundi account yake kubva kune iPhone
Apple inogadzirira "Tsvaga Yangu Kutarisa" uye TVKit. Apple TV neApp Store iri kuona?